Taranka kalluunka | Kalluunka
Taranka kalluunka ku jira aquariums-ka Way xoogaa adag tahay, sidaa darteed dhammaan macluumaadka aan heli karno had iyo jeer wax bay noo tarayaan.
Si kalluunkeenu u tarmo waa inaan maanka ku haynaa astaamo badan iyo faahfaahinta nooc kasta si loo gaaro, maadaama aysan had iyo jeer ahayn wax la gaari karo, iyadoo la tixgelinayo inay ku jiraan maxaabiis.
Meeshaan Waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah inaad ku raaxeysato kalluunkeenana u soo saar. Caqli ahaan, goor dambe waa inaan tixgelin siino arrimaha sida kordhinta quraaradda ama faahfaahinta kale ee halkan ku yaal Way faalloon doonaan si aysan kuu indha indheyn.
Taranka kalluunka maahan wax sahlan waana inaan marwalba xasuusnaano inaan ladhaqmayno noolaha.
Kalluunku wuu xiriiri karaa
by Jarmal Portillo samee 2 sano .
Xaqiiqdii waxaad waligaa su'aal ka keentay xaqiiqda ah in kalluunku xiriiri karo iyo sida ay u sameyn karaan. Kooxo kala duwan ...
Qalimaanta Farrowing ee kalluunka
by Jarmal Portillo samee 3 sano .
Haddii aad haysatid quraaradda leh kalluun aad u tiro badan, waa suurtagal in dhowr ka mid ahi ay tarmaan oo ay yeeshaan da 'yar.
Wareegga nolosha cajiibka ah ee salmon
by Jarmal Portillo samee 5 sano .
Salmons waa kalluun caan ku ah qabashada waxyaalo badan intii ay socdeen wareegga nolosha ee soo jiidashada lahaa. Ku dhowaad dhammaan…
Ku soo-saarista kalluunka kuleylka ku jira quraaradda quraaradda
by Maria samee 9 sano .
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ku soo saari kara quraaradda iyada oo aan dhibaato weyn la qabin. Maanta waxaan tixraaci doonnaa xaaladaha ugu habboon ee ...
Iskudarsashada kalluunka Betta
by Viviana Saldarriaga samee 10 sano .
Kalluunka Betta waa mid ka mid ah kalluunka ugu fudud ee la soo saari karo ee jira, marka haddii aanad khibrad lahayn ...